Ingabe Ukupaka Kwesizinda Kufanelekile? | Martech Zone
NgeSonto, uJanuwari 28, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Cha… noma mhlawumbe cha. Hhayi mina, noma kunjalo.
Kuyini Ukupaka Kwesizinda? Kulapho unombono omuhle ngegama lesizinda, ubheka ukubona ukuthi kuthengiwe yini. Akusiyo… ngakho-ke uyayithenga. Esikhundleni sokusebenzisa isizinda sewebhusayithi, uyipake. Ukupaka kwesizinda kuyindlela yokuthola imali eyengeziwe futhi abanye babanikazi abakhulu bamagama wesizinda benza izigidi kuwo. Kunezindlela ezimbili zokwenza imali ngokupaka kwesizinda:
Abantu kwesinye isikhathi bathayipha i- I-URL kunokuba uyifune. Uma kwenzeka unegama lesizinda, ungafaka ukukhangisa okusebenzayo ekhasini lokufika. Uma abantu bachofoza ekukhangiseni, ukhokhelwa ngumkhangisi.
Abantu bafuna igama lesizinda, ngakho-ke bakwenza isipho.
Ngenkathi ngifunda i-athikili namhlanje, ingikhumbuze ngokuhlolwa kwaleli bhizinisi engangidinga ukubika ngalo. Ngaphezulu konyaka odlule, ngifunde ngamasayithi ambalwa kumagazini weBusiness 2.0 ahlinzeka ngemithombo ye-Domain Parking. Ngaleso sikhathi, Sedo yayingenye yezinkampani zokupaka izizinda ezazingenamacala angaphambili. Ngibhale iposi le-blog ngithi ngizoyidubula.
Igama lesizinda engibe nenhlanhla enkulu ngalo kwaba navyvets.com. Ngemuva konyaka nginikwe isizinda, ngibe nama-hits angama-93 enza u- $ 1.22 ngaphandle kokunikezwa kwentengo yokuthengisa engu- $ 2,500. Njengoba ngikhokha u- $ 14.95 ngonyaka ukuvuselelwa ngakunye kwesizinda, lokho kuyilahleko enhle.
Lokho bekuyisixhumanisi sami esisebenza kahle kakhulu.
Vele kunezindlela zokwenza lokhu kusebenze empeleni. Ukube benginezinkulungwane zamagama wesizinda ngipakwe nombhalisi onginikeza amanani aphansi, ngikwazile ukukhangisa ngokwami… mhlawumbe ngokubeka okuqukethwe kumasayithi ngokukhangisa okuthile kokuziphatha - bengingathola inzuzo. Uma ngenza idola ngonyaka egameni ngalinye, bengingathenga amagama angama-100,000 futhi ngenze imali engenayo. Kepha anginaso isikhathi sokwenza lokho. Futhi, amagama amahle kakhulu asevele athengiwe ngakho-ke kungathatha isikhathi esiningi ukulinda izizinda eziphelelwe yisikhathi noma imali eningi ukuzama ukuthenga amanye angahle aphenduke imali eyodwa noma amabili.
Ngakho-ke, umsebenzi wami wokupaka wesizinda cishe usuphelile. Isibhamu sami sokugcina kuzoba ukubeka isizinda sami esihle kakhulu eSedo ngama- $ 39 ukuze ngibe naso ekhasini lokuqala ukuze ngibone ukuthi ngingamthola yini umthengi. Ngizokhomba ezinye izizinda zami kule bhulogi, ekhiqiza isilinganiso esingcono kakhulu sokuchofoza ekukhangiseni kwayo kuneSedo ($ 0.10 I-EPC). Ngizokwazisa ukuthi kuhamba kanjani!
Jul 5, 2007 ngo-3: 23 PM
Ukhombe ezinye zezinkinga zangempela nge ukupaka kwesizinda ” njengoba ikhona njengamanje. Udinga ukuba nezizinda ezimbalwa zethrafikhi ephezulu noma izizinda eziningi ezenza kangcono kancane kunokuzikhokhela zona.
Ngakolunye uhlangothi, ezinye izizinda zami zihlala zipakwe kangcono kunokwenza okuqukethwe nezikhangiso ze-AdSense kuzo.
Nov 27, 2007 ngo-8: 37 AM
Ukupaka Kwesizinda AKUSEBENZI, kumosha isikhathi nje, ngaphandle kokuthi ube nesizinda esihle esingu-100 + 200+ ukuzama, ukubhalisa isizinda esincane futhi ufisa ukuthola inzuzo iphupho, ungachithi isikhathi
May 8, 2008 ku-3: 51 PM
Uma igama lesizinda likhiqiza imali eningi kunemali ebhalisiwe kufanelekile ukuyipaka. Thola i-100 yalolu hlobo lwesizinda futhi ungathola imali engenayo
May 12, 2008 ku-4: 38 AM
Uma usebenzisa izinkampani zokupaka iDomain bathatha ingxenye yemali yakho engenayo! Uma usingatha iskripthi sakho sokupaka sesizinda (njengaleso esitholakalayo kusuka ku- http://www.domainzaar.com ) ugcina u-100% wemali yakho engenayo yesikhangiso… futhi basebenzisa iphromoshini ye-MAHHALA .COM DOMAIN NAME ne-FREE EXPIRED DOMAIN FINDER SOFTWARE kuze kube sekupheleni kuka-may 2008. kuhlole http://www.domainzaar.com
Jul 22, 2008 ku-10: 01 AM
Awukwazi ukumelana nokuphawula lapha mayelana ne-domainzaar.
Hawu bantu. Yeka ukumoshwa kwemali. Ngokuqondile imali yami, i- $ 100 yami.
UThomas - noma ngabe ngubani igama lakhe - wasiza kakhulu ekushintshaniseni ama-imeyili ngenkathi ngizama ukukhokha KODWA ngemuva kokulanda… .. sawubona noma ubani ekhaya ??? Ama-imeyili amaningi aqondisa ngqo nangefomu lawo lokuxhumana lewebhusayithi. Lutho! Akunampendulo.
Lo mbhalo yi-IMHO ukuchitha u- $ 100.
Kunemibhalo yamahhala etholakalayo esebenza ngempela.
Ungamoshi imali oyisebenzele kanzima uyithumela ku-domainzaar.
Jul 10, 2008 ngo-10: 35 PM
Ngathenga kusuka ku-domainzaar ngonyaka odlule, iphutha elikhulu kakhulu.
Benginegama lesizinda elihloniphekile (bas3.com) futhi ngafaka isoftware ye-domainzaar kuso, ngesonto elilandelayo, othile ubethumbe i-DNS yami futhi eyikhomba kuwebhusayithi yakhe. I-DZ igcina iphasiwedi yomlawuli ngokusobala kufayela lombhalo elifinyeleleka.
Ngicele umhleli wohlelo ukuthi akulungise lokhu, ngilinde izinyanga ezi-2 bese ngiyilahla.
Manje ngisebenza ukuthola isisombululo esisingathiwe sokupaka isizinda, esingasabalalisa ngokushesha igama elingukhiye elisuselwa kusayithi lamakhasi ayi-5 kungakapheli umzuzu noma ngaphezulu, ngicabanga ukuthi ngizoyikhokhisa kanjani, kufanele ngisuse% phezulu? kufanele ngibe nemali ekhokhwayo yaminyaka yonke yezizinda ezimbalwa? kufanele ngivumele ukuba nayo njengomkhiqizo ongalanda?
lezi yizinto engizibuza zona, i-coder ijwayela ama-webapps aPI atholakala kuyo yonke inetha, ngidinga nje ukuyiklama futhi ngiyimakete.
Jul 31, 2008 ku-8: 26 AM
I-Domain Zaar ingumbumbulu, iwumbumbulu, futhi iyiphutha kunoma ngubani ocabanga ukuthenga umkhiqizo. Isoftware ayisebenzi njengoba kuchaziwe futhi akukho ukusekelwa. Uma ungenankinga nokuhlukana ne- $ 99 qhubeka futhi ukwenze… umkhiqizo wakho ngeke usebenze kahle futhi awusoze wezwa lutho oluvela endodeni yeZaar Scam futhi. Umkhonyovu City.
Sep 13, 2008 ku-7: 00 AM
Konke akulungile. Zama i-fabulous.com ne-hitfarm.com - kudingeka ungene ezinhlelweni zabo ze-premium, noma kunjalo. Iqale eminyakeni embalwa eyedlule, manje yenza i-12,000 / inyanga ithathe ikhaya, i-23,000 / mo isiyonke.
Dec 16, 2008 ku-6: 08 AM
Ukupaka kwesizinda kungokwabantu abavilaphayo abangakwazi ukwenza ama-microsites azenzakalelayo wamagama abo wesizinda. Ububi bokupaka kwesizinda ukuthi uhola kuphela i-30% yamandla akho nokuthi awakhi isici seminyaka sezizinda zakho.
Douglas, ngiyabonga ngale ngxoxo. Iseluleko esincane, uma ungenankinga: shintsha umbhalisi wakho. Angikaze ngikhokhe ngaphezu kwe- $ 8 kuye ku- $ 9 ngokuvuselelwa. $ 14.95 iphakeme kakhulu, indlela iphakeme kakhulu !!! Ungagcina kalula u- $ 6 egameni ngalinye lesizinda. Kuzwakala njengobhontshisi kusizinda esisodwa kepha sinike isibalo esisheshayo uma unamagama wesizinda ayi-100 noma ayi-1000… Izizinda eziningi ziphonsa izimoto ezintsha namaholide okunethezeka kubabhalisi bazo ababizayo 🙁
Jan 28, 2009 ngo-4: 36 PM
Lokhu okuthunyelwe okuhlekisa kakhulu kwebhulogi mayelana nokwenziwa kwezizinda nokupaka kwesizinda engikufunde esikhathini eside. Ukupaka kwesizinda kunamaphutha futhi kuyalahleka unyaka nonyaka odlulayo kepha amagama wesizinda ajwayelekile aqhubeka enzela abanikazi bawo imali enhle (lokho kungamakhulu ezinkulungwane zamaRandi ngosuku ngokungafani nesibonelo sakho sobuwula sedola ngamagama wesizinda ayi-100,000 okungaba ukulahlekelwa okukhulu lapho ubhekene nemali yokuvuselela.) Futhi ukusekela umbono wakho ekudabukeni emanzini wesizinda ngamagama wesizinda amabi kakhulu ukuthi i-domainer engasoze yazikhathaza ngokuba nayo ingasaphathwa ipaki elinye iphutha. Uma kukhona okuthile, nanoma yimuphi umphathi wesizinda angakutshela, uzoba nethuba elingcono lokwenza imali kanye / noma ukupheqa isizinda sakho ngokulakha. Izinhlobo ezithile kuphela zamagama wesizinda esijwayelekile ezisebenza kahle ngenkathi zimile futhi i-vyvyvets.com akuyona enye yazo. Kungcono ukuqhathanisa ama-aphula nama-aphula esikhundleni sokuqhathanisa ama-aphula ne-broccoli. Vele uthi
Jan 28, 2009 ngo-7: 40 PM
Wow - angiqiniseki ukuthi ngifanele ukuthola umklomelo we-'blog blog post 'enhle kakhulu. Ngivumelana nawe, empeleni. Ngivele ngathi akungifanele futhi ngahambisa eminye imibhalo esekelayo. Abanye abantu bangakuthola kuyibhizinisi elinenzuzo impela… hhayi mina.
UJun 27, 2009 ngo-6: 03 AM
Igama lesizinda Ukupaka Umqondo Kusizile Ngivakashelwe iSedo .Site For the Domain name PARKING imininingwane .Yinto enhle .U Ungathenga negama Lesizinda EsizeniI-Tucktai.com& uyithengise kuUkusebenzisa Ukubhaliswa Kwenqwaba.Ungadala iSiza Legama Lesizinda Ukupaka & nomthengisi nawe ungaba ngumthengisi wesayithi ..